हालैका वर्षहरूमा व्यापक गैर-परम्परागत चिकित्सा को माध्यम प्रयोग। स्वाभाविक, विशेष ध्यान संग केहि बिरुवाहरु लाभकारी गुण भुक्तान। आखिर, लोक उपचार को व्यञ्जनहरु अक्सर तिनीहरूलाई आधारित छन्। यी बिरुवाहरु श्रेय हुनुपर्छ, र सहिजन। यो मसला केही रोगहरु को उपस्थिति मा तीब्र रिकभरी बढवा दिन्छ। त्यसैले, के नरक को जीव लागि उपयोगी छ?
नरक के हो
सहिजन बन्दागोभी को परिवार पर्छ जो एक बारहमासी herbaceous बोट छ। यो एक fleshy मूल र शक्तिशाली छ। एक बिरूवा को स्टेम furrowed, खोक्रो माथि branched र ठाडो। सहिजन उचाइ र 1.2 मिटर बढ्न सक्छ। यसरी Basal पात दाँतेदार oblong-गोलो, ठूलो, किनारा मा, हृदय आकारको आधार हो। फूल साना florets मा संकलित र धेरै tassels छ। यो सामान्यतया जुन वा मई मा सहिजन blooms। तर, मुख्य लाभदायी सहिजन को गुण मानव शरीर लागि कली मा केंद्रित छन्।
जब यो बाली सहिजन राम्रो छ
मसला को सबै उपयोगी गुणहरू बचत गर्न, यो बाली गर्न समय लायक छ। यो सबै भन्दा राम्रो गिरावट गरिन्छ। यो समय जरा समावेश धेरै अधिक पदार्थ सकारात्मक हाम्रो शरीर असर थियो। सुक्खामा छैन लामो समय स्पाइस गर्न, विशेषज्ञहरु बालुवा भरिएको एक विशेष बाकसमा भण्डारण गर्न सिफारिस गर्छौँ। उपयोगी र हानिकारक, शरीर को लागि नरक फिर्ता 1500 ई.पू. पहिले नै ज्ञात छ के। यो उत्पादन जस्तै ब्राजिल, स्विट्जरल्याण्ड र फ्रान्स रूपमा, धेरै देशहरूमा औषधीय उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिन्छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ।
सहिजन को संरचना मा उपयोगी घटक
त्यसैले, के नरक को जीव लागि उपयोगी छ? जवाफ यो प्रश्नको त गाह्रो छैन। ध्यान दिएर उत्पादन को संरचना विचार गर्न यो Suffice। पहिलो र मुख्य बी भिटामिन, भिटामिन सी र ई, फोलिक एसिड, फाइबर, अस्थिर र आवश्यक तेल को मसला मा उत्कृष्ट सामग्री प्रदान गर्न छ। साथै, सहिजन भाग ट्रेस तत्व भरिएको छ रूपमा: यो आर्सेनिक, तामा, मैंगनीज, फलाम, छ फस्फोरस, सोडियम, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम, पोटासियम, साथै एमिनो एसिड, चिनी, lysozyme - जीवाणुरोधी एजेन्ट, प्रोटिनको आधारित।
यो मसला भिटामिन मा सी बारे5पटक कागति वा सुन्ताला भन्दा बढी छ कि टिप्पण लायक छ। सहिजन छैन पनि कालो currants, यस सन्दर्भमा निम्न छ।
यो बोट को पात पनि उपयोगी घटक धेरै फेला परेन। तिनीहरूलाई बीच हामी allyl उल्लेख गर्नुपर्छ तोरी तेल, एस्कोर्बिकएसिड, र एक इन्जाइम mirozin जस्ता।
को जीव सहिजन मा प्रभाव
यो बोट साँच्चै अद्वितीय हो भन्नुभयो हुनुपर्छ। र नरक शरीर लागि उपयोगी छ कि छैन भनेर प्रश्न, हामी मात्र एक निश्चित जवाफ दिन सक्छन्। निस्सन्देह, हो! अस्थिर पदार्थ - को जरा भाग रूपमा अस्थिर उत्पादन समावेश गर्दछ। तिनीहरूले शरीर bactericidal प्रभाव प्रतिपादन, को रोगजनकों केही हटाउन सक्षम छन्।
पनि सहिजन मा glycoside sinigrin cleavage lysozyme र allyl तोरी तेल मा खेल्छ जो छ। यी घटक पनि bactericidal प्रभाव छ भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ। allyl तोरी तेल को सानो परिमाणमा आफ्नो भोक सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। अक्सर, सहिजन पाचन पर्चा को secretion प्रोत्साहित गर्न प्रयोग गरिन्छ। साथै, उत्पादन antiscorbutic, expectorant र choleretic प्रभाव छ।
उत्पादन को निको गुणहरू
त्यसैले, के नरक को जीव लागि उपयोगी छ? अक्सर, यो उत्पादन वैकल्पिक चिकित्सा को माध्यम को तयारी को लागि प्रयोग गरिन्छ। अक्सर लागूपदार्थ सहिजन आधारित छाला, मूत्राशय र कलेजो सम्बन्धित रोगहरु सुनिंनु, गाउट, rheumatism उपस्थिति, साथै मा, पेट को रोगहरु को सबै प्रकार मा निर्धारित छन्।
रोग निको पार्न, यो प्राचीन समयमा प्रयोग सहिजन छ। यो बोट को मूल देखि मज्जा उत्पादन। ताजा वजन कपडा को एक टुक्रा लागू भएको थियो। यस्तो poultice प्रभावित क्षेत्रमा लागू गरिएको थियो।
यो सहिजन festering घाउ रूपमा ध्यान विकर्षण र कष्टप्रद हालतमा लागि प्रयोग गर्ने slurry उल्लेख गर्नुपर्छ।
सर्दी विरुद्ध लडाई
शरीर को लागि सहिजन को उपयोगी गुण शताब्दीयौंदेखि अध्ययन गरिएको छ। प्राचीन रोम को चिकित्सकहरु अक्सर तीव्र श्वसन संक्रमण, साथै आफ्नो रोकथाम नियन्त्रणका लागि यो उत्पादन प्रयोग। आज, वैकल्पिक चिकित्सा विशेषज्ञहरु खुट्टा र खुट्टाको poultice बनाउन सिफारिस गर्छौँ। यस्तै प्रक्रिया रोकथाम लागू हुन्छ। चिसो छैन बचा हुन सकेन, यदि र रोगी coughing दुख्छ, केही अवस्थामा, आफ्नो डाक्टर एक लोक उपाय, मह र सहिजन आधारमा तयार गर्ने सल्लाह दिन्छन् सक्छ। यसलाई बनाउनको लागि, तपाईं यी घटक को बराबर अनुपात मा ले र उनलाई मिश्रण गर्न आवश्यक छ। माथि चम्मच लागि एक दिन तीन पटक हुन सक्छ औषधि प्रयोग गर्न।
दन्त चिकित्सा र सहिजन
अक्सर, सहिजन को मसूडों को सुनिंनु उपचार गर्न प्रयोग गरिएको छ। grated ताजा उत्पादन को एक चम्मच लिन र रक्सी वा पानी एक गिलास बारेमा खन्याउन जरूरी हालतमा तयार।4घण्टा खडा र फिल्टर निरूपण mouthrinse लागू हरेक आधा घण्टा गर्न मसला।
वैज्ञानिकहरू पनि बकवास ती घटक दाँत क्षय कारण छ कि जीवाणुहरु मार्न छन् कि पाएका छन्। यो बोट को आधार मा विशेषज्ञहरु एक टूथपेस्ट विकास गर्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ।
सहिजन रस: प्रयोग र आवेदन
त्यसैले, नरक शरीर र के रूप मा उपयोगी छ के यो प्रयोग गर्न सकिन्छ? अक्सर गर्दा वैकल्पिक चिकित्सा को खाना पकाउने माध्यम उत्पादन को रस प्रयोग। उदाहरणका लागि, भारत मा एक समान पेय ध्यान भंग sciatica को उपस्थिति मा एक दबाइ रूपमा प्रयोग गरिन्छ। साथै, सहिजन रस तिनीहरूलाई मा भडकाऊ प्रक्रिया को कान मा डाले छ।
शरीरमा प्रभाव सहिजन सधैं सकारात्मक छ। तर नियम, समस्या त्यहाँ अनुपात को कुनै अर्थमा छ जहाँ अवस्थामा मात्र उत्पन्न। उदाहरणका लागि, allyl तोरी तेल एक उच्चारण स्थानीय प्रभाव छ। दीर्घकालीन उपचार हुँदा एक पदार्थ दुखाइ जल कारण र छाला को निस्तब्धता, बाल्न गर्न सक्नुहुन्छ। यो allyl तोरी तेल मसला को स्वाद र गन्ध गराउँछ कि उल्लेख गर्नुपर्छ। यसको vapors पानी जस्तो आँखा र खराब खोकी हुन सक्छ। ठूलो रकम प्रयोग उत्पादन गंभीर gastroenteritis गर्दा विकास हुन सक्छ।
"Korizaliya": प्रभावकारी चक्की rhinitis को लागि आवेदन निर्देशन
पुरुष Tikhvin धारणा विहार: तस्बिर, इतिहास, ठेगाना, समीक्षा
पोर्क जिब्रो को नुस्खा, वा कसरी सुन्दर aspic खाना पकाउनु
कसरी आफ्नो हात संग स्नान मा समतल बनाउन जानकारी को लागि
क्विड्रोटर आफ्नो हातले कसरी इकट्ठा गर्ने? सेटअप र क्वाड्रोकोप्टर नियन्त्रण गर्न
एक स्मारक खाने पकड केडीई र कसरी